हिमाल खबरपत्रिका | बन्दैछ बुटवल
चालू आयोजनाहरू समयमै सकिने हो भने मात्र पनि बुटवलको विकासले ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ।
जब साँझ् छिप्पिंदै जान्छ; राजमार्गका सौर्य–बत्ती बल्न थाल्छन्, सडक उज्यालोको रौनक हेर्दा यो त्यही बुटवल―सुनौली खण्ड नै हो भनी विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ। तीन वर्षपछि हालै मात्र अमेरिकाबाट फर्किएका बुटवल उपमहानगरपालिका–९ मिलनचोकका मोहन भण्डारी (४४) लाई पनि त्यस्तै लाग्यो। भैरहवा विमानस्थलबाट बुटवल आउँदै गर्दा यहाँ भएको विकासका दृश्य देखेर उनी अचम्मित भए। “बाफ् रे! पत्याउनै नसकिने परिवर्तन भएछ”, उनले भने।
बुटवल―सुनौली २४ किलोमिटर सडकमा ८०० वटा सोलार बत्ती जडान हुँदैछन्। अहिलेसम्म बुटवलतर्फ ११५ र भैरहवातर्फ ३५ वटा बत्ती जडान भइसकेका छन्। यसका लागि रु.२ करोड बजेट छुट्याइएको छ। त्यसो त बुटवल बजार क्षेत्रमा २०६८ सालदेखि नै सौर्य ऊर्जाको प्रयोग हुन थालेको हो। राजमार्ग र आवासीय क्षेत्रका सडकमा पनि सौर्य ऊर्जा विस्तार हुन थालेपछि शहर उज्यालो देखिन थालेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका योजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठ बताउँछन्।
बुटवलमा मुलुककै सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्दैछ। रु.१ अर्ब ७७ करोड लागतमा १० बिघा क्षेत्रफलमा बनिरहेको केन्द्रको काम धमाधम भइरहेको इन्जिनियर रविन बर्तौला बताउँछन्। केन्द्रको छेउमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल बनाउने महत्वाकांक्षी योजना पनि बनाइएको छ। रु.२ अर्बको लागतमा बनिरहेको बुटवललाई सोझै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने चार लेनको बेलवास―बेथरी पर्यटन मार्गले शहरलाई झ्नै सम्पन्न बनाउने आशा गरिएको छ।
बुटवलमै एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को अनुदानमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र, अटोभिलेज पूर्वाधार र भूमिगत खानेपानी आयोजना शुरू भएका छन्। बसपार्कमा पश्चिमाञ्चलकै नमूना भनिएको लुम्बिनी बस टर्मिनल तथा सपिङ्ग कम्प्लेक्सको निर्माण सकिनै लागेको छ।
सिद्धार्थ राजमार्गको बेलहिया―बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। आयोजनाका इन्जिनियर लीलाबहादुर भण्डारीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा शुरू भएको यो आयोजना अबको दुई वर्षभित्र सकिनेछ। निर्माण सकिएपछि अहिले ३० मिनेटको बेलहिया यात्रा १९ मिनेटमा छोट्टिनेछ। यो सडकमा १२ वटा अपाङ्गमैत्री आकाशे पुलको निर्माण पनि शुरू भएको छ। आयोजनाअन्तर्गत नगर क्षेत्रभित्रका सडकलाई पनि ६ लेनको बनाउन थालिएको छ। यसको लम्बाइ राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोलासम्म साढे ३ किलोमिटरको हुनेछ भने चौडाइ १०४ फुट। यसका लागि ३११ घर समेत भत्काइने भएको छ।
निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र।
बाह्रैमास पहिरो खसेर क्षति पुर्‍याउने बुटवल–तानसेन सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रको विकल्पमा बेलवास हुँदै नुवाकोटबाट पाल्पाको झुम्सा जोड्ने शान्ति मार्गको काम पनि भइरहेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनीका अनुसार, रु.१३ करोडको यो सडक दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ।
तल्लो बुटवलको देवीनगर र मोतीपुर जोड्ने तिनाउ नदीमा पक्की पुल निर्माण पनि आगामी वर्ष सक्ने लक्ष्य छ। झुम्साबाट पानी ल्याइने बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजनाको काम आठ वर्षदेखि जारी छ। त्यस्तै कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
भौतिक पूर्वाधारसँगै बुटवलकै मोतीपुरमा प्रदेश–५ स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि रु.५ करोड छुट्याइएको छ। जिल्लाको सदरमुकाममा केन्द्रित प्रशासन, नापी, मालपोत लगायतका कार्यालय बुटवलमा पनि विस्तार भएपछि चहलपहल बढेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू चुनिएपछि शहरमा विकासको गति बढ्ने स्थानीयको आशा छ। राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा बुटवललाई देशकै नमूना शहर, स्मार्ट सिटी, विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेदेखि एसीजडित प्रतीक्षालय जस्ता थुप्रै आकर्षक प्रतिबद्धता जनाइएका थिए। “अब जनताले ती प्रतिबद्धताहरू लागू गर्न दलहरूलाई दबाब दिनुपर्छ”, नागरिक जागरण अभियानका अध्यक्ष पदम कार्की भन्छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी निर्वाचनका बेला गरेका बाचा अक्षरशः पालना गर्ने बताउँछन्। “योजनाबद्ध विकासका काम थालिसकेका छौं। पाँच वर्षभित्र ठूलो परिवर्तन दिलाउनेछौं”, उनी भन्छन्। निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सकिए र स्थानीय सरकारका काम प्रभावकारी भए बुटवल विकासको 'रोल मोडल' शहर बन्ने रूपन्देही क्षेत्र नं. ४ का सांसद् एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बताउँछन्। “तर, समयमै आयोजनाहरू सक्न नागरिकले निगरानी गरिरहनुपर्दछ”, पौडेल भन्छन्।